जनक तिमिल्सिना, भिषा काफ्लेअसार १०, २०७५
विगतको जस्तै देशभरका विद्यालयहरूको उत्कृष्टता मापनसँगै नवीनतम प्रयोगका रूपमा देशको पछिल्लो प्रादेशिक संरचनाअनुसार यो वर्ष प्रादेशिक स्तरमा समेत तीन–तीन उत्कृष्ट विद्यालय छानिएको छ । देशभरको उत्कृष्टता मापनमा हामीले कम्तीमा २ सय विद्यार्थीलाई परीक्षामा समावेश गरेका विद्यालयलाई यो प्रक्रियामा समावेश गराएका छौं भने प्रदेशमा कम्तीमा १ सय विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल गराएका विद्यालयलाई मापदण्डमा राखेका छौं । पुरा पढ्नुहोस्
प्रहरी कर्मचारीका साथै सर्वसाधारण नागरिकका सन्तानलाई मुलुकभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ध्येयका साथ नेपाल प्रहरी विद्यालयको स्थापना वि.सं. २०४० मा भएको हो । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार फरक शैलीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने मार्गमा विद्यालय सक्रिय रहेको प्रिन्सिपल नवीन श्रेष्ठ बताउँछन् । पुरा पढ्नुहोस्
मनोज गजुरेल, असार १०, २०७५
निदाउन खोज्छु, निद्रा पर्दैन । उठ्छु, बस्न मन लाग्दैन । बानी परिसकेका साथीहरू घुर्न थालिसके । म भने पानीबाट बाहिर उछिट्टिएको माछाजस्तो छटपटिईरहेको छु । बल्ल–बल्ल बिहानीपख निद्रा पर्‍यो । निदाएको मात्र के थिए, सपनामा बाघको खोरमा रहेछु । पुरा पढ्नुहोस्
जसको प्रतिष्ठा दाउमा छ
साप्ताहिक संवाददाता , असार १०, २०७५
प्राय: विवाद पनि हुन्छ, मेसी राम्रा कि रोनाल्डो ? तर त्यससँगै जोडिएर आउने अर्को तथ्य के पनि हो भने उनीहरूले अहिलेसम्म विश्वकप जित्न सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरू विश्वकपसँग जोडिएर आउने स्थापित नाम होइनन । यसपल्ट उनीहरूको प्रदर्शन कस्तो हुने हो ? सबैको नजर त्यतैतिर छ । यो प्रश्न यसपल्ट किन पनि गहन छ भने विश्वकप–२०१८ उनीहरूका लागि सम्भवत: अन्तिम विश्वकप हुनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
ट्विटरमा समर्थकको भीड हेर्ने हो भने ब्राजिल वा अर्जेन्टिनामध्ये एकले जित्छ तर रसियामा हुने वल्र्ड फुटबलचाहिँ जर्मनीले जित्छ । पुरा पढ्नुहोस्
सञ्चारमाध्यममा आइरहेका आफ्नो तथा गायक आर्जन पाण्डेबीचको प्रेम सम्बन्धका बारेमा केकी हालसम्म ‘मौन’ बसेकी छिन् । प्रारम्भमा गीतका प्रचारका लागि मात्र मौन बसेको अनुमान गरिए पनि पछिल्लो समय आएर केकी र आर्जनबीचको सम्बन्ध गम्भिर मोडमै पुगेको हो कि भन्ने अनुमान समेत गर्न थालिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय सागर अधिकारी ‘सरद’को पहिलो एल्वम सार्वजनिक भएको छ । थुप्रै फुटकर गीतमा संगीत दिएका गायक तथा संगीतकार अधिकारीको एकल संगीत रहेको ‘प्रणय’ एल्वम सार्वजनिक भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
सार्वजनिक गीतमा बिशम आफैले अभिनय समेत गरेका छन् । गौतमका शब्दमा संगीत सिर्जु अधिकारीले भरेकी छिन् । पहिलो पटक सिर्जुसँगै म्यूजिक भिडियोमा जाडी बाँधेका बिशमले आफ्नो तेस्रो गीतसम्म पनि सिर्जुको साथ भने छाड्न सकेका छैनन् । पुरा पढ्नुहोस्
फिफाको आधिकारिक एप ‘२०१८ फिफा वल्र्ड कप रसिया’ डाउनलोड गरे सबै टिमसँग जोडिएको रियल टाइम इन्फर्मेसनका साथै स्कोरसमेत हेर्न सकिन्छ । त्यसैगरी यसमा खेलसँग सम्बन्धित एक्सक्लुसिभ भिडियो तथा तस्बिरहरू उपलब्ध छन् । विश्वकपमा सम्मिलित ३२ वटै टिमसँग सम्बन्धित सबै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने यो एपमा खेल सुरु भएपछि नोटिफिकेसन आउन थाल्छ । पुरा पढ्नुहोस्
पनामाको टिममा युरोपेली लिग खेलेको अनुभव प्राप्त चार जना खेलाडी छन् । तीमध्ये जेमी पेनेडो टिममा मुख्य र अनुभवी खेलाडी हुन् । यी ३६ वर्षीय गोलरक्षक कप्तान पनि हुन् । कोलम्बियाली प्रशिक्षक हर्नन गोमेज सन् २०१४ देखि यो टिमसँग आबद्ध छन् । यहाँ उल्लेख गर्नै पर्ने तथ्य के पनि हो भने पनामाको क्षेत्रफल ७५ हजार ४ सय १७ स्क्वायर किलामिटर छ भने जनसंख्या ४० लाखभन्दा केही बढी मात्र छ । पुरा पढ्नुहोस्
चलचित्रको छायांकनमा नेपाल आर्मीको ठूलो सहयोग रहेको निर्देशक अधिकारीले बताएका छन् । हाल भारतमा अवस्थित देहरादुनको नालापानीमा सन् १८१४ मा नेपालले ब्रिटिस साम्राज्यविरुद्ध युद्ध लडेको थियो । आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै भारतसम्म आइपुगेको तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न अघि बढेको समयमा त्यसलाई रोक्न नेपालले युद्ध लड्नु परेको थियो। पुरा पढ्नुहोस्